बिमामा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्दै, उत्कृष्ट १० को सूचिबाट बाहिरियो
काठमाण्डौ । बजेटको बिषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच संसदमा जुहारी चले पनि पूँजीबजारको उत्साह चाहि मर्दै गएको छ । बजेटपछि खासै उत्साह नदेखिएको पूँजीबजारको परिसूचक(नेप्से परिसूचक) बुधबार ८.५६ अंकले ओरालो लागी १५२३.५६ अंकमा झर्न पुग्यो । बजेटपछि बिमा समूहप्रतिको लगानीकर्ताको टुटेको आकर्षण बुधबार पनि जोडिएन । बिमा...
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने र त्यस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणहरुको सहभागिता समेत बढाएर ४९ प्रतिशतको सेयर स्वामित्व कायम गराउने नीति लिएसँगै त्यसको प्रभाव पूँजीबजारमा देखिने क्रम जारी छ । आइतबार र सोमबार दोहोरो अंकले उक्लिएको जलविद्युत समूहको सूचक...
बजेट भाषणप्रति पूँजी बजार प्रतिक्रिया दिंदै, हाइड्रोमा आकर्षण
काठमाण्डौ । सरकारी लगानीका जलविद्युत आयोजनामा जनसहभागिता बढाउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि लगानीकर्ताहरु त्यसतर्फ ओइरिएका छन् । बजेट भाषणको भोलिपल्ट आइतबार दोहोरो अंकले बढेको जलविद्युत समूहको सूचकले सोमबार पनि दोहोरो अंककै वृद्धि हासिल गरेको छ । जलविद्युत समूहको सूचक बढे पनि बजेट आउनुअघि लगातार पूँजीबजारलाई माथि उचाल्न...
बजेटलाई पूँजीबजारले दिएन ग्रिन सिग्नल, जलविद्युत समूहमा आकर्षण
काठमाण्डौ । सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूँजीबजारले ग्रिन सिग्नल दिएन । पूँजीबजार, बैंक तथा बिमा क्षेत्रका लागि बजेटले राम्रो काम गरेको सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरे पनि लगानीकर्ताहरुले बजेटलाई ग्रिन सिग्नल दिएनन् । जसका कारण आइतबार नेप्से परिसूचकका अधिकांश समूहमा रातो पोतियो । समग्रमा नेप्से...
हकप्रदमा धितोपत्र बोर्डको विशेष व्यवस्था, बढीमा २ हप्ताभित्र सेयर निश्कासनको स्वीकृति
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले राष्ट्रबैंकले तोकेको समयसीमाभित्र पूँजी वृद्धि गराउने चटारोमा रहेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने गरी हकप्रद सेयर निश्कासनमा लम्बेतान व्यवस्थालाई छोटो, सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीका अनुसार हकप्रद सेयर निश्कासनको अनुमति दिने...
कसरी बन्ने सेयरबाट करोडपति ? पढ्नुस् रविन्द्र भट्टराईको यो पुस्तक
काठमाण्डौ । नेपालमा पछिल्लो समय सेयरमा लगानी गर्नेहरु बढेका छन् । सेयरमा लगानी गरेर पैसा कमाउन चाहनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । समग्र सेयर बजार र यसको संचालन प्रणाली क्रमशः व्यवस्थित बनिरहेको समयमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण अचाक्ली बढेको देखिन्छ । केही वर्षअघिसम्म सेयरको विषयमा बेवास्ता गर्नेहरु समेत अहिले सेयरको बिषयमा...
पूँजीबजारमा फेरि एकैदिन दुई रेकर्ड, इण्डेक्स र कारोबार अहिलेसम्मकै उच्च
काठमाण्डौ । बुल हुँदै गएको पूँजीबजारमा तीन दिनदेखि नयाँ–नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । यही क्रममा मंगलबार समेत बजारले दुईवटा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । पूँजीबजारमा यो दिन नेप्से इण्डेक्स अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाईमा पुगेर तथा कारोबार रकम समेत अहिलेसम्मकै उच्च भई दुई नयाँ रेकर्ड बनेको हो । मंगलबार नेप्से परिसूचक २०.४६ अंकले बढ्दै साढे १५ सय...
नेप्सेमा एकैदिन १ करोड ६८ लाख कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा चारवटा वाणिज्य बैंक र अन्य दुई कम्पनीको गरी एकैदिन मंगलबार १ करोड ६८ लाख ४९ हजार १ सय १८ कित्ता बोनस शेयर कारोबारका लागि सूचिकृत भएको छ । यसैगरी, तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमीटेडले २१ लाख २१ हजार ७ सय ५० कित्ता प्रिफेन्सियल शेयरलाई साधारण शेयरमा परिणत गर्दै कारोबारका लागि सूचिकृत गरेको छ...
काठमाण्डौ । हरेक दिनजसो नयाँ नयाँ रेकर्ड बन्दै गएको पूँजीबजारमा सोमबार फेरि एकैदिन तीनवटा रेकर्ड बनेका छन् । बिमा समूहको परिसूचक सोमबार पनि २६१.०३ अंकले उक्लियो । एकैदिन ६८ करोडको शेयर कारोबार गरेर बिमा समूहले रेकर्ड राख्यो भने नेप्से परिसूचक १४.६८ अंकले उक्लिदै १५२४.०७ को नयाँ उचाई चुम्न सफल भयो । सोमबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै...
दुई बिमा र एक फाइनान्सले बोनस शेयर दिने, एक लघुबित्तले ३ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्ने
काठमाण्डौ । दुई इन्स्योरेन्स कम्पनी र एक फाइनान्सले आफ्ना शेयरधनीलाई बोनस शेयर र नगद लाभांश दिने भएका छन् भने अर्को एक माइक्रो फाइनान्सले पूँजी वृद्धिको योजनाले हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । प्रूडेन्सियल र हिमालय इन्स्योरेन्स तथा सगरमाथा फाइनान्सले बोनश शेयर वितरण गर्ने भएका हुन् भने नमस्ते बित्तीय संस्थाले ३ करोड ७५ लाख मूल्यको...
काठमाण्डौ । विगत केही सातादेखि बिमाको शेयर खरीदमा लगानीकर्ताहरु अपहत्ते गरेर लागेका छन् । ठूला र अर्थपूर्ण कारणबिना नै बिमामा बढेको लगानीकर्ताको घूइँचोले जुनसुकै बेला उच्च जोखिम आउनसक्ने र लगानीकर्ता डूब्नसक्ने अवस्था रहेको छ । शेयर बजार आफैंमा सधैं जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । सधैं हाई रिस्कमा लगानी गर्नुपर्ने बजारमा बिमामा अर्थपूर्ण...
शेयर बजारले एकै दिन तीन नयाँ रेकर्ड बनायो
काठमाण्डौ । शेयर बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार तीनवटा नयाँ रेकर्ड बनेका छन् । एकै दिन हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै रकमको शेयर कारोबार भएको छ भने नेप्से परिसूचकले ऐतिहासिक उचाई चुमेको छ । बिमा समूहको परिसूचक एकैदिन ३३६.८२ अंकले बढेर समेत अर्को रेकर्ड बनेको छ । नेप्से परिसूचक आइतबार १०.०७ अंकले बढी १५०९.३९ अंकको ऐतिहासिक उचाई चुम्न...
किन अचाक्ली बढिरहेको छ बिमाको सूचक ? अन्धाधुन्ध लगानीले जुनसुकै बेला जोखिम आउने संभावना !
काठमाण्डौ । पूँजीबजारलाई विगत केही सातादेखि बिमा समूहले डोहोर्याइरहेको छ । बजारमा एकछत्र दवाब सिर्जना गरिरहेको बिमाको लगानी सुरक्षित नभए पनि लगानीकर्ताहरुको आश्चर्यलाग्दो भीड त्यस्ता कम्पनीहरुमा देखिएको छ । बिमा कम्पनीको शेयर खरीदमा देखिएको आकर्षणले जोखिम बढाइरहेको विज्ञहरुले बताए पनि लगानीकर्ता यस्ता कुरा सुन्न तयार छैनन् । बरु...
खानीखोला हाइड्रोको आइपीओ कहाँ–कहाँबाट भर्ने ? कहिलेसम्म भर्ने ?
काठमाण्डौ । खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले ९ करोड ३१ लाख मूल्यको शेयर आगामी जेठ १६ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दर(फेस भ्यालू)का ९ लाख ३१ हजार ४ सय २९ कित्ता शेयर आइपीओ गर्न लागेको हो । प्रारम्भमा आइपीओका लागि आवेदन दिने समय जेठ १९ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । आवेदनका लागि...
नेपाल लाइफले ३१ लाख कित्ता शेयर एफपीओ गर्ने
काठमाण्डौ । जीवन बिमा कम्पनीको कुल बजारको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३१ लाख कित्ता शेयर अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ) गर्ने भएको छ । कम्पनीको १६ औं साधारणसभाले संस्थापक समूहमा रहेको ८० प्रतिशत सेयरलाई ७० प्रतिशतमा झार्दै बाँकी १० प्रतिशत अतिरिक्त निस्कासनको स्वीकृति प्रदान गरेको हो । १० प्रतिशत शेयर...